မြန်နှုန်းမြင့်ရထား RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
လက်ရှိမြန်နှုန်းမြင့်ရထား၊ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားသတင်းများ၊ YHT လေလံပွဲများနှင့်တင်ဒါရလဒ်များ
Bursa တွင်တည်ဆောက်မည့် 10 စီမံကိန်းအကြားမြန်နှုန်းမြင့်ရထားရှိသည်။ Söze“ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားရဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုသင်တောင်းဆိုနေတယ်၊ ​​ငါတို့အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်။ သင့်ကိုနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်ပေးပါစေ စနေနေ့မှာ… [ပို ... ]
Bursalılarမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလို; ပြနာက… Bursa ဟာမှန်တယ်လို့မရှာတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာငါတို့အားလုံးသဘောတူတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြို့ပြလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုကလိုချင်တာကိုရှက်ရွံ့ခြင်းလို့မြင်တယ်။ သူသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအများပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှသူရရှိထိုက်သောဝေစုကိုမရရှိခဲ့ပါ။ [ပို ... ]
သူတို့သည်Eskişehirသို့အမြန်ရထားဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ Eskişehirဒီမိုကရက်တစ်ပါတီပြည်နယ်ဥက္ကChairman္ဌHüseyinÖzcanသည်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူမျှအစိုးရနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲအစိုးရအားပြင်းထန်စွာဝေဖန်ခဲ့သည်။ ပြောဆိုသောသူတို့၏အမျိုးအ [ပို ... ]
Bayburt အုပ်ချုပ်ရေးမှူးCüneyt Epcim မီးရထားဖော်ပြချက်
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Cuneyt Epcim သည် Bayburt မှ Gumushane သို့လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောမီးရထားလမ်းဆွေးနွေးမှုများအစီအစဉ်တွင်အမှန်တရားသည်ထင်ဟပ်ခြင်းမရှိဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Epcim ပြောတာကရထားကမြန်တယ်။ တင်ဒါ၏အပြောအဆို [ပို ... ]
မြန်နှုန်းမြင့်ရထား Teknosab သည် Karacabey နှင့်Bandırmaအထိတိုးချဲ့မည်။
မကြာသေးမီက၊ Karacabey သည်လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများနှင့်အတူလျှင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသော်လည်းခရိုင်အားများစွာအထောက်အကူပြုမည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာသည်။ Karacabey ၏မြို့တော်ဝန် [ပို ... ]
Samsun Sarp မီးရထားလမ်းအတွက်အရေးပါသောအစီရင်ခံစာ
Ordu တက္ကသိုလ်၏“ ဆမ်ဆန် - ဆပ်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်း” အစီရင်ခံစာ၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ကြောင့်စီးပွားရေးပြproblemsနာများအထူးသဖြင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအတွက်၎င်းသည်အရေးကြီးသောအထောက်အပံ့တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ [ပို ... ]
IMO Bursa ဌာနခွဲ၏မြန်နှုန်းမြင့်ရထား၏မျှော်လင့်ချက်
Bursa ၏ရထားကိုတောင့်တနေခြင်းသည်ရေတိုတွင်မဆုံးသေးပါ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီး Cahit Turan ၏ယမန်နေ့ကထုတ်ပြန်သောကြေညာချက်တွင် Bursa သည်ယခုနှစ် 2023 တွင်သာအဆုံးသတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာချက်များရှိသော်လည်းအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်Yenişehir Osmaneli ဆက်သွယ်ရေး၏ Bursa-Osmaneli မူကြမ်းများရှိနေသေးသည်။ [ပို ... ]
2022 တွင်ပထမဆုံးစမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုသည်ဘေဂျင်းကျင်းပမည့်ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အားကစား၏အဓိကအခြေခံအဆောက်အ ဦ များအနက်မှပေကျင်း - Zhangjiakou မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏မြို့တော်ပေကျင်းနှင့် Zhangjiakou အကြားရထားလမ်း [ပို ... ]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan 2003 yılında 10 bin 959 kilometre olan toplam demiryolu ağının aradan geçen sürede yüzde 17 artarak 12 bin 803 kilometreye ulaştığını söyledi. Bakan [ပို ... ]
Haberi… Çanakkale yerel medyasında gördük. Gerçi, daha önce de hızlı trene Bursa’dan bağlanma arzularını okumuştuk, fakat bu defa daha heyecanlı olduklarını gördük. Hatta… Heyecandan çok iddialı bir görüntü var. “Çanakkale’ye [ပို ... ]
Trakya ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီစက်မှုလက်မှုနှင့်နည်းပညာ၏ပြည်နယ်ညွှန်ကြားမှုနှင့်ညှိနှိုင်းကာအေဂျင်စီနှင့်Tekirdağ, Çorluနှင့် Çerkezköy ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသတွင်း၌ကုမ္ပဏီများထုတ်လုပ်အမျိုးသားရေးကုမ္ပဏီများနှင့်အတူလှိမ့်စတော့ရှယ်ယာနှင့် ပူးပေါင်း. စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကုန်သည်များ [ပို ... ]